Mogadishu Journal » 2016 » December » 13
Xassan Sheekh oo booqasho lama filaan ah galabta ku digay safaarada imaaraadka carabta
Mjournal :-Madaxweynaha DF Soomaaliya Xasan Sheekh Max’uud ayaa galabta booqasho ku tagay Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho iyo isbitaalka Sheekh Zaa’id oo ku dhow Safaaradda. Madaxweynaha ayaa booqashadiisa lagu fasiray mid uu ugu kuurgalayay howlaha safaarada iyo...
The White House strongly suggested Monday that Donald Trump was the beneficiary of Russian meddling in the US election, pointing to Trump’s own ties to Russia as evidence of Moscow’s intentions. “You didn’t need a security clearance to figure out who...
In yet another attack, suspected Al-Shabaab terrorists damage Safaricom and Orange telecommunication masts in Kotulo, Mandera County, on Monday night. Elwak Deputy County Commissioner Peter Karanja on Tuesday confirmed the incident and said the masts were destroyed at Chuma...
Madaxweyne Xassan Sheekh oo booqday safaarada Imaaraadka
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay maanta Isbitaalka Sheekh Sayd iyo xarunta safaaradda Imaaraadka uu ku leedahay Magaalada Muqdisho. Madaxweynaha J. Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka hore waxa uu booqdey Isbitaalka Sheekh Sayd ee...
Iran ayaa sheegtay inay samaysanayso maraakiib ku shaqeeya nukliyeer
Mjournal :-Madaxweynaha Iran Xassan Rouhani ayaa ku amray masuuliyiintiisa in la sameeyo maraakiiib ku shaqaysa nukliyeer, isagoo ku eedeeyay Maraykanka inay jabiyeen heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii hore. Hogaamiyayaasha waddamada ugu awooda badan ayaa ku heshiiyay in...
Dad reer miyi ah oo toogasho ku dilay sarkaal ka tirsanaa Al-shabaab
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha dhexe ayaa sheegaya in laba nin oo rayid ah ay toogasho ku dileen mid ka mid ah Taliyeyaasha Sare sare ee Al-shabab ee gobolka aad looga yaqaan oo la yirahdo Cabdiraxman Raaxaale. Weerarka lagu dilay ninkan waxa uu ka dhacay...
Mjournal :-Xildhibaannada labada aqal ee dhawaan la doortay ayaa durbaba bilaabay in ay qaataan kararka aqoonsiga, iyadoo la filayo in dhawaan uu furmo kalfadhigii ugu horeeyay ee baarlamaanka Mudanayaasha la siiyay shahaadada aqoonsiga maanta ayaa waxaa kamid ahaa Senatarkii ugu...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud oo Maanta Shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho, ayaa sheegay in 15-ka bishaan uu furmi doono Kal-fadhigii 1-aad ee Barlamaanka cusub ee Soomaaliya, Wuxuuna ku baaqay in si deg-deg ah loogu Gurmado Shacabka ay Abaaruhu...
Taageerayaasha adduunka daafihiisa kala jooga ayaa u codeeyey cayaaryahanka khadka dhexe ee Al-Jeeriya iyo kooxdda Leicester Riyad Mahrez , isagoo ka guulaystay Pierre-Emerick Aubameyang, Andre Ayew, Sadio Mane & Yaya Toure. Mahrez ayaa u sheegay qaybta caayaraha ee BBC...
Xiisad colaadeed oo u dhaxeysa maamulka Hirshabeelle iyo Ahlu Sunna
Mjournal :-Wararka ka imaanaya degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Magaaladaasi ay ka jirto Xiisad Dagaal oo u dhexeeysa Ahlu Sunna iyo maamulka Hirshabeelle. Ahlu Sunna ayaa degmada Matabaan geysay ciidammada aad u badan,waxaana ay ka cabsi qabaan in maamulka...
Kenya oo sheegtay in ay albaabada u laabeyso qeybo ka mid ah xeryahay Dhadhaab
Mjournal :-Dawlada Kenya ayaa sheegtay inay xiri doonto xerada Kaambi Caws ee ka midka ah xeryaha Dhadhaab. ‘Waxaan xireynaa Kaambi Caws 15ka Febraayo sanadka soo socda’. Ayuu yiri guddoomiyaha Degmada Dhadhaab Harun Kamau. Wuxuu intaa ku daray in sidaa loo yeelayo...
Dowladda Sacudiga oo shir ka leh caafimaadka xoolaha Soomaalida
Mjournal :-Golllaha wasiirada dawlada Sacuudiga ayaa qabtay shir ku saabsan arimaha ka taagan dalka Soomaaliya. Golaha wasiirada ee dawlada Sacuudiga ayaa shirkaa waxaa wasiiradu uga wada hadleen amaba niqaasheen arimo badan oo Soomaaliya iminka ka taagan. Arimahaa ayaa waxaa...
Gudiga doorashada Galmudug oo ka digay in la leys hor taago xildhibaano lagu doortay Cadaado
Mjournal :-Guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Galmudug iyo Wakiilada u matala Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray war saxaafadeed ay uga hadlayaan howlihii doorashooyinka ee ka dhacay Cadaado iyo hanaankii loo maray meel marintiisa.
Hogaamiyayaasha madasha-wadda-tashiga oo mar kale Muqdisho ku shiraya maanta
Mjournal :-Mashada Hoggaanka Wada-tashiga qaran ayaa maanta oo Talaado ah ku shiraya magaalada Muqdisho, iyagoo ka wada hadlaya sida laga yeelayo muranka ka taagan xubnaha Aqalka Sare ee ka imaanaya Gobolada Sool iyo Sanaag. Shirkan oo lagu iclaamiyay war murtiyeedkii 8-dii...